Erdogan oo la kulmay qorbe joogta Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Erdogan oo la kulmay qorbe joogta Soomaalida
23rd June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Iyadoo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu soo gebagebeeyey shir ay halkaas ku yeesheen qaar ka mid ah qurbe joogtada Soomaalida ayaa ayaa Ra’iisul wasaaraha dalka Turkiga, Receipt Dayib Erdogan wuxuu xalay gurigiisa ku casuumay xubno ka tirsan wafuudda ka qeybgaleysay shirkaas.
Cabdiraxmaan Ceynte oo ka tirsanaa guddiga qaban-qaabada shirka, kana mid ahaa xubnihii la kulmay ra’iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in Receipt Dayib Erdogan uu u sheegay inuu taageeray shirka, kana shaqeyn doono sidii loo sii hormarin lahaa Soomaaliya.
Erdogan ayaa sababta uu u taageeray shirka ku sheegay inuu ahaa mid kayimid dadka Soomaalida ee qurba-joogta ah, isagoo xusay in dowladdiisu ay ugu duwan tahay dalalka kale taageeridda aragatida dadka Soomaalida.
Dhinaca kale waxaa shalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga lagu soo gabagabeeyay shirka qurbo joogta Soomaalida ee ay ku sameysanayeen nidaam ay dalka ku taageeraan.
Gabagabada shirka waxaa lagu doortay guddi fulin oo uu madax u yahay Cabdi Xariir Baaruud.
Raysulwasaare Receipt Dayib Erdogan ayaa sanadkii 2011 booqasho ku yimid caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, xilligaasoo abaaro xooga jireen, wuxuuna indhaha caalamka usoo jeediyey Soomaaliya.
Maamuladii 3-da iyo 6-da gobol ee Koonfur Galbeed oo la mideeyey
Akhri qodobada ay ku heshiiyeen maamuladii isku hayey Koonfur Galbeed